Maalinta: Sebtember 10, 2019
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa inay ka shaqeyso dhammaan qeybaha kala duwan ee magaalada si loo hubiyo in muwaadiniintu ku noolaan karaan nabad iyo nabadgelyo magaalada caasimada ah. Gawaarida Gawaarida iyo Qandaraasyada Mashruuca Adeegyada Gaaska Dabiiciga ah ee Magaalada Ankara [More ...]
Booqashada TCDD ee Kuuriyada Koonfureed, oo horumar weyn ka sameysa tikniyoolajiyadda tareenka
Wasiir ku-xigeenka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Enver İskurt iyo Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun ayaa booqday Kuuriyada Koofureed si uu wadahadal ugalo maal-galinta tareenka iyo teknolojiyadda, iyo [More ...]
TÜVASAŞ Booqashada Madaxweynaha
Duqa Gebze Büyükgöz Zinner, (TÜVASAŞ) Turkey baabuur Industries Inc. Agaasimaha Prof. Dr. İlhan Kocaarslan wuxuu ku marti qaaday xafiiskiisa. Duqa Gebze Büyükgöz Zinner (TÜVASAŞ) Turkey baabuur Industries Inc. Agaasimaha Prof. Dr. [More ...]
Çorlu 25 328 waa dhageysiga labaad ee kiiska ka dhanka ah masiibada tareenka kaas oo 1 lagu dilay iyo XNUMX dhaawacmay. Waxaa lagu arkay maxkamada 'Asluze Court' ee ku taal Çorlu. Eedaysanaha Kurt, “Wadada [More ...]
Tijaabada Shilka tareenka Çorlu ee 10 wuxuu bilaabmayaa Sebtember!
Istaanbuul ayaa ka socota degmada Uzunköprü ee Edirne HalkalıRakaabka 362 iyo tareenka rakaabka ah ee 6, 8 Luulyo 2018'de Çorlu degmada Tekirdag ee u dhow Sarılar Neighborhood waa la rogay. xnumx ee ay [More ...]
Gaadiidka Muğla wuxuu ku jiraa jeebka
Codsiyada guur-guura ee Dawladda Hoose ee 'Muğla Kent Card' ee la hirgaliyay intaas ka dib, muwaadiniintu waxay awood u yeelan doonaan inay kaararka baskooda ku maareeyaan mobilada. Dawlada Hoose ee Magaalada Mu ,la, laga soo bilaabo kaararka baska ilaa khariiddada marinka baska, oo caan ku ah Muğla [More ...]
Xisaabinta wadooyinka cusub ee lagu socdo iyo wadooyinka lugeynaya ee Sakarya
Dowladda Hoose ee Magaalooyinka ayaa isku diyaarineysa inay hirgaliso daraasad cusub oo kordhin doonta adeegsiga baaskiiladaha magaalada. Marka la dhammaystiro shaqooyinka loo yaqaan 'asphalt', jidadka cusub ee socodka iyo baaskiil wadista ayaa la dhisay inta u dhaxeysa Isgoyska Xagaaga iyo Wadada Baaskiilka ee Sunflower [More ...]
Ku Wareejinta Iibinta Gawaarida Gawaarida ee Wasaaradda waxay ku tabarucaysaa Bilyan 1 Bilyan oo Konya ah
Duqa Magaalada Konya ee Magaalada caasimada ah Ugur Ibrahim Altay ayaa gudoomiyay wajiga koowaad ee Konya Metro in Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku siiyay warka wanaagsan ee booqashadiisa Konya. [More ...]
Madaarka Istanbul Halkalı Bilowga Qodista Dhulka
Qoditaanku wuxuu ka bilaabanayaa metrooga garoonka diyaaradaha ee Istanbul. Xariiqda mashiinka 8 uu qodi doono ayaa looga golleeyahay in lagu dhaafo masaafada rikoodhada 64,5-mitir maalin kasta. Line 30 filayaa in la dhameystiro bisha ... Osman ka war Turkey Gazette Çobanoğlu'nun; [More ...]
Shaqada Wadada Ugu Weyn ee Taariikhda Tarsus waxay bilaabmaysaa
Dowladda Hoose ee Magaalada Mersin, Tarsus waxay bilowdey shaqada wadooyinka ee ugu weyn taariikhda degmada. Degmooyinka Tarsus Pirömerli-Boztepe-Böğrüe Neri Xaafaduhu way isku xirmaan waxayna muhiimad weyn u leeyihiin gaadiidyada xaafadaha kale ee gobolka, Magaalo-weyn [More ...]
Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin Bishii Sebtember Kulankii 1. Duqa magaalada Vahap Seçer, oo kahadlaya isgoyska ayaa yidhi, asıl Shaqada dhabta ah ee nidaamka tareenka dhulka hoostiisa mara waa Mersin. [More ...]
Jadwalka Tram ee Eskisehir
Bilowga sanad dugsiyeedka 2019-2020, ESTRAM waxay kordhisay tirada adeegyadeeda taraamka si loo yareeyo cufnaanta taraamyada. Ku dhawaaqista bilowga barnaamijka shaqo qaboobaha, ESTRAM wuxuu ku dhawaaqay in 7 taraamyada kaladuwan ay fulin doonaan duullimaadyada 1253 maalin kasta. [More ...]
Aktaş Holding, 6. Wuxuu ka qeyb galayaa Shirka Tiknolojiyadda Tareenka cusub ee Caalamiga ah
Aktaş Holding, oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waa weyn adduunka soo saarista nidaamyada xayiraadda hawada, ayaa ka qeyb qaatay ururro ay waaxdu ku kulmayso hal saqaf, gaar ahaan nidaamyada tareenka ee ay dhowaan maalgelin weyn ku sameysay. [More ...]